I-Blog-Tipping: I-Catalyze, Inethiwekhi Yomphakathi Yokuthuthukiswa Kwesoftware Nongoti Bokusetshenziswa | Martech Zone
I-Blog-Tipping: I-Catalyze, Inethiwekhi Yomphakathi Yokuthuthukiswa Kwesoftware Nongoti Bokusetshenziswa
NgeSonto, Okthoba 21, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sekuyisikhashana nginga ithiphu ibhulogi futhi ngakhunjuzwa ngalokho emasontweni ambalwa edlule nguTom Humbarger ka Khathaza. Ukushintshwa komsebenzi nenkontileka eseceleni kufinyeze kakhulu isikhathi engingasisebenzisa kusayithi lami usuku ngalunye. Ngokujabulisayo, lokho sekuqala ukuphenduka manje.
Okokuqala, Eminye Impendulo nge-Blog-Tipping Yangaphambilini
Ngithole izwi ku-André kwaLendo.org ukuthi ifayela le- ushintsho engiluncomile kusayithi lakhe kuholele ekwenyukeni okumangazayo kwezivakashi nokubukwa kwamakhasi. U-André wayenabavakashi abangajwayelekile abangama-290 ngosuku nokubukwa kwamakhasi angaba ngu-700 ngaphambi koshintsho. Manje, Lendo.org ine Izivakashi eziyi-1200 ezihlukile ngosuku, nokubukwa kwamakhasi okungaba ngu-3000!!!
Namuhla, ngizocebisa ICatalyze - Umphakathi Wabahlaziyi Bebhizinisi kanye nochwepheshe be-UX - Abantu Abaklama Ukuklama Isoftware Engavamile. ICatalyze idlulela ngale kwe-blog, iyinethiwekhi yokuxhumana nabantu ngakho-ke lokhu kuzoba yinselelo impela! UTom ungiqinisile emasontweni ambalwa edlule futhi ubelinde ngokubekezela!
Nawa amathiphu akho ebhulogi:
Ungahle uhleke ngalokhu, kepha ngokwethembeka bekufanele ngigijime ngithole ukuthi i-UX isho ukuthini! Angibonanga ukuthi yisifinyezo se-User Experience. Anginasiqiniseko sokuthi abantu bacinga ku- “UX”… ungahle uthande ukubhala u- “Experience User” ngezihloko zekhasi, njll. Ekhasini, ungahle uthande ukusebenzisa> amagama afushanisiwe> amathegi: UX ukuze izinjini zokusesha zikhase zombili igama kanye nesifinyezo.
Kuzoba yinselelo, kepha ngingakukhuthaza impela ukuthi unikeze izixhumanisi zokuphakelayo ekhasini lakho lasekhaya. Uma ungathuthukisa okuphakelayo okuphelele kokuthunyelwe kwakamuva, izingxoxo zakamuva zesithangami, mhlawumbe nemicimbi yakamuva - lokho kunganikeza inani eliningi labafundi.
Kulelo nothi elifanayo, ngibonile ukuthi empeleni ngingakuthola okuphakelayo kwe-RSS kubhulogi yakho kepha akufakiwe kusihloko sakho sokuhlanganiswa neziphequluli. Zonke iziphequluli zakamuva zizobheka igama lesixhumanisi se-RSS kunhlokweni wamakhasi akho futhi zizokhombisa ngokuzenzakalela inkinobho yokubhaliselwe ye-RSS kubha yekheli. Nakhu ukuthi ikhodi ibukeka kanjani:
Nakhu ukuthi kubukeka kanjani uma uya ekhasini lami kuFirefox:
Nakhu ukuthi ikhasi lakho libukeka kanjani:
Uma wenza kube lula ukuthi abantu babhalise kusayithi lakho, uzothola ababhalisile abaningi. Qiniseka ukuthi usebenzisa ithuluzi elifana ne- FeedPress ukuqapha ukuthi unababhalisile abangaki.
Ukube bengiyi-Google Bot ngikhuhla ikhasi lakho lebhulogi, bengizokhomba ikhasi lakho njenge- “Blog thumbarger”… mhlawumbe hhayi amagama awukhiye obuwafuna. Uma ungaguqula izihloko zakho zekhasi zibe isihloko sangempela sekhasi, ku leli cala: Ingabe uyi-Designer Thinker? Catalyze Ukuhlakanipha Kwamanje nguTom Humbarger
Izinjini zokusesha zinaka ukuthi okuqukethwe kwakhiwa kanjani emakhasini akho. Endabeni yokuthunyelwe kwakho kubhulogi, isihloko seposi simane nje siyisixhumanisi nesigaba = ”siblog_PostTitle”. Lokho ngeke kutshele Injini Yokusesha ukuthi kukhona okubalulekile ngalesi Sihloko. Uma ukwazi ukungena emathunjini ohlelo lwakho lokusebenza, ngizoqinisekisa ukuthi nginamathegi esihloko, noma> h1> noma> h2> amathegi afaka isihloko sami seposi lebhulogi. Ngingancoma futhi ukubhala okuthunyelwe kusetshenziswa omaki besihloko.
Mhlawumbe ikhasi elinethuba elikhulu yikhasi lakho lasekhaya. Leli ikhasi elilodwa elikhulu lezixhumanisi lapho libonwa yiNjini Yokucinga. Ukube bekulikhasi elifomethwe ngezihloko nezingcaphuno ezimakwe ngokufanele, ubuzokwazi ukuthola lokho okuqukethwe kukhonjwe kangcono.
Kukho ikhalenda ekhasini kukhona isixhumanisi sokubhalisa .. kepha akukho lutho kusixhumanisi sokubhalisela kuso. Ngizoqinisekisa futhi ukuthi usho izihloko zamakhasi njengoba ngibhale ngezihloko zebhulogi.
Ukumba ukwakheka kwekhasi lakho, ngibona umugqa oyinkimbinkimbi wamatafula nama-div. Angifuni ukushutha kubathuthukisi engikanye nabo .NET, kepha ngibona lokhu kaningi ukuthi kubuhlungu. Umthuthukisi omkhulu we-NET uzoba nesikhathi esinzima sokuthola into, ngakho-ke uphonsa itafula elizungezile ukuze kube lula.
Amathebula enzelwe idatha, ama-divs namashidi wesitayela okuqukethwe.
Cabanga ngale ndlela - zenze sengathi ungumkhangeli wenjini yokusesha futhi uzama 'ukubona' ukuthi yikuphi okuqukethwe ekhasini okulusizo ukukhomba kukho. Abakhasi bathatha isigatshana sekhasi… akekho owazi kahle ukuthi amaphesenti maphi, kepha abalithathi lonke ikhasi. Uhlelo lwakho lokusebenza lunekhodi yokufomatha eningi kangangokuba kunzima ukuthola okuqukethwe! Ngesikhathi owenzayo, sekuphakathi nekhasi. Lesi sitayela sivame kakhulu ekuthuthukisweni kwe-NET. Kwenza uhlelo lokusebenza lube lula ukubhala, kepha kube nzima kubakhasi ukuba bafunde. Uma kunezindlela zokunikeza impendulo ohlelweni lwakho Lokulawulwa Kokuqukethwe, sicela ubazise.
Empeleni bengifuna ukuthatha isiqongo ku- "Powered by iRise" ukuthola eminye imininingwane kepha ixhunyaniswe nekhasi elingenalutho.
Unamathegi we-Meta ashukumisayo wamagama angukhiye nezincazelo ekhasini. Kuyindida ukuthi izinjini zokusesha eziningi azizinaki kakhulu lezi, kepha azikwazi ukulimaza. Incazelo yakho ye-meta idinga umsebenzi othile, noma kunjalo. Uma ngibona ikhasi lakho lekhalenda livela ngenxa yalokho, incazelo ibizovela ithi “Catalyze | Imicimbi ”. Angiqiniseki ukuthi uzothola abantu abaningi ngokuchofoza kulokho! Esikhundleni salokho, bengizosebenzisa isigaba sakho sokuqala, “Ikhalenda lomcimbi weCatalyze liwumthombo ophelele wayo yonke imisebenzi? ezendawo noma ezobuzwe? ezithakazelisa kubahlaziyi bezebhizinisi nochwepheshe abanolwazi ngesipiliyoni sabasebenzisi. ”
Alikho ifayela le-robots.txt enkombeni yakho yezimpande. Amafayela eRobots.txt ake ama-Search Engine bots azi ukuthi ufuna isayithi lakho liseshwe kanjani. Ungathola ithani lemininingwane kuRobots.txt kulokhu Imibuzo Evame Ukubuzwa ikhasi.
Alikho ifayela le-sitemap.xml enkombeni yakho yezimpande futhi alikho ifayela leRobots.txt ukukhomba ukuthi likuphi. Ukhiye wokwenza injini yakho yokusesha ibe nobungani ukwenza kube lula ukuthi Izinjini Zokucinga zibeke ibalazwe lesiza sakho futhi zithole lapho izinto zikhona. Imephu yesayithi imephu yomgwaqo ehlelelwe isiza sakho. Ngaphandle kwalokho, Izinjini Zokusesha zingabhebhethekisa isiza ngesixhumanisi kuphela… zingazi ukuthi yini ebalulekile nokuthi isayithi ihlelwe kanjani. Lokhu kungaba yinto ebaluleke kakhulu ongayenzela isiza sakho! Funda up at Ibalazwe.org
Ngiqagela eyokugcina, kepha ngenxa yokushoda kwamathuluzi wokugcina emuva asetshenzisiwe ku-Catalyze, isiza sakho kungenzeka asibheki i-Google Blogsearch nezinjini ezinkulu zokusesha lapho isiza sakho sishintsha noma okuthunyelwe kwebhulogi kwenziwa. Nakulokhu futhi, akukhona ukuthi isiza sakho ngeke sitholakale, kepha ukwazisa ngokusebenzayo izinsizakalo ezizungeze inetha ngeke kuze kulimaze.
Uthole isiza esisodwa, uTom, kepha akekho owaziyo ukuthi sikhona ngenxa yokushoda kwanoma iyiphi i-Search Engine Optimization. Bheka i-SEODigger kusayithi lakho bese uza kuphela "ngeCatalyze". Konke lokho okuqukethwe kumosheka ngaphandle kokuthi ungathola indawo yokuSesha i-Injini enobungane. Uma uzibuza ukuthi kungani i- "Catalyze" igama lakho elingukhiye, bheka i- ukuhlehlisa usesho esizeni sakho futhi uzobona ukuthi kungani.
Sikufisela inhlanhla! Angiqiniseki ukuthi ngabe unezinsizakusebenza zentuthuko ukwenza ushintsho noma kufanele usebenze ngenkampani eyathuthukisa uhlelo lokusebenza, kepha kunomsebenzi omningi okufanele wenziwe.
Tags: ukubhloga kwebhulogiamathiphu ebhulogikhuthaza
Phila, Thanda, Hleka
I-Order of Operations ingilungiselele kanjani uHlelo
Okthoba 23, 2007 ngo-9: 49 AM
Yebo! Amathiphu abe intuthuko enkulu kubhulogi yami. Manje sengisebenza kanzima ukufinyelela ama-unique angu-2000 ngosuku.
Umsebenzi omuhle Douglas!